Wararka - Maxay yihiin qeexitaannada iyo nolosha adeegga tuubada dabka?
Tilmaamaha tuubada dabka iyo nolosha adeegga, maanta si aan hal mid kuugu jawaabo. Si loo soo bandhigo shaqooyinka aasaasiga ah ee tuubooyinka dabka: tuubooyinka dabka waxaa loo isticmaalaa in lagu qaado biyaha cadaadiska sare ama dareeraha ololka sida xumbo. Tuubooyinka dab-damiska ee horumarsan waxay ka samaysan yihiin polymers sida polyurethane. Tuubooyinka dabku waxay leeyihiin kala goysyo bir ah oo ku yaal gees kasta waxaana lagu dhejin karaa tuubo kale si loo dheereeyo masaafada ama biibiile si loo kordhiyo cadaadiska duritaanka dareeraha.
Kala soocidda tuubooyinka dabka:
Tuubbada dabku waxay u qaybsantaa laba nooc oo dahaar leh oo aan lahayn dahaar: Tuubbada dabka dahaarka waxaa ka mid ah suufka, suunka koollada naylon, suunka polyesterka buuxinaya suunka, tuubada caaga ah ee hemp. Cadaadiska, waxa loo qaybiyaa afar qaybood oo kala ah: 0.8Mpa, 1.0Mpa, 1.3Mpa and 1.6Mpa.Waxay loo qaybiyaa afar qaybood oo kala ah dhexroorka: 50, 65, 80 or 75 and 90 mm. Sida ku cad habka tolmada, waxa loo qaybiyaa laba qaybood: suunka biyaha ee cad iyo suunka biyaha twill.
Tilmaamaha iyo qaabka tuubada dabka
Nooca 8 65 xabagta xabagta; Nooca 13 65, 80 xabagta xabagta; Nooca 16 65 xabagta xabagta
Nolosha adeegga tuubada dabka:
Sida ku cad xeerarka qaranka ee khuseeya, haddii tuubada dabka la isticmaalay hal mar, waa in lagu beddelaa ama lagu hayaa qaybta dayactirka dabka.Oo waa in la tijaabiyaa ugu yaraan hal mar sannadkii, sababtoo ah tuubada dab-damiska waxay u baahan tahay in la mariyo cadaadiska biyaha sare ee habka isticmaalka. Haddii wakhtigu aad u dheer yahay, waxaa jiri doona dhejinta derbiga gudaha. hababka dayactirka suunka way kala duwan yihiin.
Kor ku xusan waa soo koobidda qeexitaannada tuubada dabka iyo nolosha adeegga jawaabta, waxaan rajeynayaa in aan ku caawiyo.Specialized ee wax soo saarka dhammaan noocyada tuubada dabka, bamka Dongfang, saldhigga micro iyo noocyada kale ee qalabka dabka, soo dhaweyn dadka isticmaala u imow inaad la tashato, waxaan u heellannahay adeeggaaga.